Cagaarshowga Shiinaha waxa uu tijaabiyaa warshadeeyayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka > Tijaabada Cagaarshowga
Tijaabada Cagaarshowga waa hab caawiye ah oo lagu baaro cudurrada nidaamka hepatobiliary. Haddii la rabo in si sax ah loo ogaado cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro taariikhda bukaanka, baaritaanka jireed iyo sawirka sawirka, iwm, si loo sameeyo falanqayn dhamaystiran. Intaa waxaa dheer, waa in la tilmaamaa in ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah baaritaanka shaqada beerka, laakiin shay kasta uma baahna in la sameeyo. Caadiyan, takhtarku wuxuu dooran doonaa hal koox ama dhowr baaritaan oo ku saleysan taariikhda bukaanka iyo calaamadaha.
Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay Tijaabada Cagaarshowga sababtoo ah noocyada kala duwan ee hawlaha beerka. Wadarta borotiinka serum, saamiga albumin iyo globulin, turbidity serum iyo flocc test, test alfa-fetoprotein iyo wixii la mid ah. Enzyme serum ee ka walaacsan cudurka beerka ayaa leh transaminase ee qaybta saddexaad ee badarka, transaminase cawska badarka, fosfatase alkaline iyo dehydrogenase lactate si ay u sugaan; Tijaabooyinka la xidhiidha isbeddelka bayoolojiga iyo soo saarista waxa ka mid ah sulfonbromophthalein sodium retention test, iwm. Tijaabooyin la xidhiidha dheef-shiid kiimikaad ee midabka xameetida, sida qiyaasida bilirubin iyo kaadida saddex tijaabo oo bile ah. Tijaabi dhiiga si aad u tijaabiso walxahan si sax ah.
Fayraska Cagaarshowga B Hbv 5 In 1 Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee Hbv Combo Test
Cagaarshowga B fayraska HBV 5 ee 1 qalab baaritaan degdeg ah HBV combo test: Baaritaanka shaqada beerka waa in lagu gudbo dhammaan noocyada kala duwan ee habka baaritaanka biochemistry iyo shaqada beerka metabolize walaac kasta index, si ay u muujiyaan shaqada beerka baaritaanka xaaladda aasaasiga ah. Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay baaritaanka shaqada beerka sababtoo ah noocyada kala duwan ee shaqooyinka beerka. Haddii la rabo in si sax ah loo ogaado cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro taariikhda bukaanka, baaritaanka jireed iyo sawirka sawirka, iwm, si loo sameeyo falanqayn dhamaystiran. Intaa waxaa dheer, waa in la tilmaamaa in ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah baaritaanka shaqada beerka, laakiin shay kasta uma baahna in la sameeyo. Caadiyan, takhtarku wuxuu ......
H1n1 Fayraska Hargabka A+b Swab/sanka Aspirate Rapid Kit
Fayraska Hargabka H1N1 A+B Swab/Nasal Aspirate Rapid Kit: Baadhitaanka shaqada beerka waa in lagu gudbo dhammaan noocyada kala duwan ee habka baaritaanka biochemistry ee ogaanshaha iyo shaqada beerka metabolize walaac kasta index, si ay u muujiyaan shaqada beerka baaritaanka xaaladda aasaasiga ah. Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay baaritaanka shaqada beerka sababtoo ah noocyada kala duwan ee shaqooyinka beerka. Haddii la rabo in si sax ah loo ogaado cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro taariikhda bukaanka, baaritaanka jireed iyo sawirka sawirka, iwm, si loo sameeyo falanqayn dhamaystiran. Intaa waxaa dheer, waa in la tilmaamaa in ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah baaritaanka shaqada beerka, laakiin shay kasta uma baahna in la sameeyo. Caadiyan, takhtarku wuxuu door......
2 In 1 Hbsag Hcv Combo 2 Panel Tijaabada Degdega ah
2 in 1 HbsAg HCV Combo 2 Panel Tijaab Degdegga ah: Baaritaanka shaqada beerka waa in lagu gudbo dhammaan noocyada kala duwan ee baaritaanka habka biochemistry iyo shaqada beerka metabolize walaac kasta index, si ay u muujiyaan shaqada beerka baaritaanka xaaladda aasaasiga ah. Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay baaritaanka shaqada beerka sababtoo ah noocyada kala duwan ee shaqooyinka beerka. Haddii la rabo in si sax ah loo ogaado cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro taariikhda bukaanka, baaritaanka jireed iyo sawirka sawirka, iwm, si loo sameeyo falanqayn dhamaystiran. Intaa waxaa dheer, waa in la tilmaamaa in ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah baaritaanka shaqada beerka, laakiin shay kasta uma baahna in la sameeyo. Caadiyan, takhtarku wuxuu dooran doonaa hal koox ama......
Baadhista Caafimaad ee Cagaarshowga B-core Antigen-ka degdega ah ee Hbcab
Baadhista caafimaadka cagaarshowga b xudunta antigen ee xirmada tijaabada hbcab ee degdega ah: Baaritaanka shaqada beerka waa in lagu gudbo dhammaan noocyada kala duwan ee baaritaanka biochemistry ee habka ogaanshaha iyo shaqada beerka metabolize walaac kasta index, si ay u muujiyaan shaqada beerka baaritaanka xaaladda aasaasiga ah. Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay baaritaanka shaqada beerka sababtoo ah noocyada kala duwan ee shaqooyinka beerka. Haddii la rabo in si sax ah loo ogaado cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro taariikhda bukaanka, baaritaanka jireed iyo sawirka sawirka, iwm, si loo sameeyo falanqayn dhamaystiran. Intaa waxaa dheer, waa in la tilmaamaa in ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah baaritaanka shaqada beerka, laakiin shay kasta uma baahna in la sam......
Xasaasiyadda Sare ee Cagaarshowga C Fayraska Hal Tallaabo oo Tijaabo Degdeg ah
Xasaasiyadda sare ee fayraska cagaarshow c hal tallaabo oo xariijimo degdeg ah: Baaritaanka shaqada beerka waa in la dhaafo dhammaan noocyada kala duwan ee habka baaritaanka biochemistry iyo shaqada beerka metabolize walaac kasta index, si ay u muujiyaan shaqada beerka baaritaanka xaaladda aasaasiga ah. Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay baaritaanka shaqada beerka sababtoo ah noocyada kala duwan ee shaqooyinka beerka. Haddii la rabo in si sax ah loo ogaado cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro taariikhda bukaanka, baaritaanka jireed iyo sawirka sawirka, iwm, si loo sameeyo falanqayn dhamaystiran. Intaa waxaa dheer, waa in la tilmaamaa in ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah baaritaanka shaqada beerka, laakiin shay kasta uma baahna in la sameeyo. Caadiyan, takhtarku wuxu......
Baqshad Cagaarshowga B Baqshadda Kahortagga Jirka Baaritaanka Qalabka Baaritaanka Degdegga ah ee Hbeab
Hepatitis B baqshad tijaabada antibody-ga HBeAb xirmada tijaabada degdega ah: Baaritaanka shaqada beerka waa in lagu gudbo dhammaan noocyada kala duwan ee baaritaanka biochemistry ee habka ogaanshaha iyo shaqada beerka metabolize walaac kasta index, si ay u muujiyaan shaqada beerka baaritaanka xaaladda aasaasiga ah. Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay baaritaanka shaqada beerka sababtoo ah noocyada kala duwan ee shaqooyinka beerka. Haddii la rabo in si sax ah loo ogaado cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro taariikhda bukaanka, baaritaanka jireed iyo sawirka sawirka, iwm, si loo sameeyo falanqayn dhamaystiran. Intaa waxaa dheer, waa in la tilmaamaa in ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah baaritaanka shaqada beerka, laakiin shay kasta uma baahna in la sameeyo. Caadiyan, t......
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Tijaabada Cagaarshowga oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Tijaabada Cagaarshowga soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Tijaabada Cagaarshowga la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.